FADEEXAD Wasiirkii arimaha Gudaha iyo Taliye GAAFOOW oo Norway u yimid in Somalida reer Muqdisho dib loo celiyo aqriso CADEYN BUUXDA - Shaaciye.com
FADEEXAD Wasiirkii arimaha Gudaha iyo Taliye GAAFOOW oo Norway u yimid in Somalida reer Muqdisho dib loo celiyo aqriso CADEYN BUUXDA 03/07/2012 .
Norway oo qorsheyneyso in ey dib u celiso Soomaalida magangelyo doonka ah ee Muqdisho ka timaada
Wasiirka arrimaha gudaha DFKM ah oo Norway arrintaas u yimid Said Abdalla Oslo Norway, diyaarin/tarjumid. Date 03.07.12
Sida lagu faafiyey wargeyska ugu afka dheer dalka Norway dowlada wadankaan ayaa diyaarisay qorshe aad qarsoodi u ah oo ey heshiis dib u celineed kula saxiixaneyso dowlada Somalia.
Taasi micnaheedu waxey tahay in dadka magangelyo doonka ah ee ka yimaada Muqdisho iyo meelaha kale ee koonfurta Somalia dib loogu celiyo si qasab ah.
Soomaalidu waa qowmiyada ugu badan ee magangeliyo doon u yimaado dalka Norway, sanadkii lasoo dhaafay ee 2011ka waxaa qaxootinimo codsaday dad gaaraaya “1,422” kun iyo afar boqol labo iyo labaatan qofood oo soomaali ah.
Usbuuci la soo dhaafay waxaa kulan qarsoodi ah uu Oslo ku dhexmaray xoghayaha guud ee dowlada Norway Pool Lonset iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, Abdisamad Mo’allin Mohamed.
Wargeyska VG-nett waa uu sii ogaa arrinta kulankan inta uusan dhicin laakiin wuxuu doorbiday in uusan shaacinin ilaa wasiirka DFKM uu dalka ka dhoofaayo arrimo nabedgelyo awgeed.
Ulajeedada ey dowlada Norway ka laheyd kulanka waxey aheyd bilaabida shaqada dib u celinta qaxootiga soomaalida ee Norway. Arrintaanina waxey imaaneysaa iyadoo qaboobihii la soo dhaafay uu socday dood ku saabsan siyaasada Norway ee ey ka mid tahay qasab dib ugu celinta qaxootiga magengelyo doonka ah ee Itoobiyaanka.
-Waxaan doonayaa in qasab dib loogu celiyo qaxootiga soomaalida. Taas bedelkeeda waxaan u sheegnay DFKM ah in aan Somalia ka hirgelineyno projektiyo wanaagsan, ayuu sheegay xoghayaha guud ee dowlada Norway.
Wuxuu sharaxay in ey jiraan calaamado muujiyaana in ey Somalia xasiloonidii dib ugu soo laabaneyso.
Xilliga hada la joogo dib uguma celino qaxootiga soomaalia magaalada Muqdisho. Laakiin waxaan ku heynaa qiimeyn joogto ah. Waxaana halkaas ka jiro horumar wanaasan. Laakiin wey adag tahay in aan hada dhahno goortaas ayaan bilaabeynaa dib u celinta qasabka ah. Ayuu sheegay Lonset Waxuu kaloo sharaxay in dowlada Somalia ey tilmaantay qiimaha ey ugu fadhido mucaawinada Norway.
Waxaa qorshaheena ku jiri karo in aan lacag ku bixino dib u dhisida laamaha garsoorka Somalia. Maanta waxaa lacag badani nooga baxdaa dadka qaxootiga ah e halkaan yimaado iyagoo aan xaq u laheyn in magengelyo la siiyo. Hadii aan lacagtaas ku isticmaali laheyn dib u celin wanaagsan oo qiimo leh waxey ahaan laheyd lacag meel wanaagsan ku baxday.
Maxey idinka yiraahdeen DFKM?
Waxey aheyd kulan aad u wanaagsan, waxaan si furan uga doodnay caqabadaha hortaagan Somalia iyo baahida aan u qabno in aan dhowrano laamaha magengelyo doonkaNorway. Taas micnaheedu waxey tahay in dadka laga diido codsiga magengelyo doonka ey tahay in dib loogu celiyo meelihii ey ka yimaadeen. Taas oo micnaheedu tahay waxaan u baahanahay wada shaqeyn in dib loo celiyo dadka codsigoda la diiday si xornimo iyo arbitaankooda ah iyo si qasab ahba.
Mucaawinada aad bixineysaan ma waxaad ku iibsaneysaan in leydiin la galo heshiis aad qasab ugu celineysaan qaxootiga codsigooda la diiday? Waxaan dhaheyno waxey tahay, waxaan bixin doonaa mucaawino hadii aan isku raaci karno projektiyo wanaagsan. In aan dib u dhisno laamaha garsoonka Somalia na waxey ka mid yihiin meelaha suurogalka ah in aan lacag ku isticmaalno.
Ma weysan aheyn deg deg in aad dib ugu celisaan qaxootiga magaalada Muqdisho, sida hada xaalku yahay?
Waxaan magengelyo siineynaa dadka u baahan magengelyo siin caalami ah,mana ahan in cid kasto oo ka timaado wadan sidii soomaaliya oo kale ah ey u baahan tahay taas. Maantana waxaa la siinayaa diidmo. Waxaan dooneynaa in aan u diyaarino dib u celin xornimo ah ama mid qasab ah.
Qorshahan oo laga soo hor jeestay.
Dowlada Norway waxey isla markiiba la kulantay ka horimaansho kaga timid xubin ku jiro isla xisbiga talada hayo.
Xisbiga shaqaalaha “AP” Xubin uga mid ah golaha deegaanka Oslo, mr Baashe Muse, oo ah noreyji soomaali ah ayaa ka soo horjeestay qorshaha wasaarada garsoorka. Arrintani waa deg deg. Sida hada xaalku yahay, ammaan ma ahan in dib loogu celiyo dadka. Ayuu Baashe u sheegay wargeyska VG-nett.
Nb: Wargeysku ma sheegin in DFKM ah ey aqbashay heshiiska dib u celineed ee Norway dooneyso iyo in kale. Laakiin waxaa warbixinka ku cad in qorshahan uu jiro. Cabdisamad, wasiirka arrima gudaha Somaliana arrintan u yimid Norway lagalana hadlay in u saxiixo in Norway qasab dib ugu celin karto somalida qaxootiga ah ee ka yimaada magaalada Muqdisho iyo koonfurta Somalia. Taas bedelkeedana ey Norway mucaawino siiso DFKM ah iyadoo sheeegtay in ey dooneyso in ey dib u dhisto laamaha garsoorka Soomaaliya.
Halkan ka aqri warbixinta wargeyska oo norweyji ah